Kudya kupi kuMadrid? 9 inokurudzirwa maresitorendi muguta | Kufamba Nhau
Kudya kupi kuMadrid? 9 inokurudzirwa maresitorendi muguta
Madrid iguta rine vanhu vazhinji vane yakanakisa gastronomic kupihwa. Mikana yacho haina magumo uye isu tinogona kutaura kuti iwe unogona kuyedza ndiro kubva kunenge chero kondinendi iri muguta. Nekudaro, kana iko kupihwa kwakakura kwazvo zvakaoma kusarudza. Kana usiri wekuMadrid uye uri kushanya, pamwe unotya kugara munzvimbo isiriyo uye kupedzisira wabhadhara mari zhinji yekudya.
Kune rimwe divi, kana iwe uchibva kuguta kana kana ukaenda uchishingairira, unogona kupedzisira wadya munzvimbo dzakadai senguva dzose. Kana iwe wakarasika zvachose kana kana iwe uchida kutsvaga nzvimbo nyowani, iwe uri mune mhanza Iwe unoda kuziva kupi kwekudya muMadrid? Mune ino posvo ini ndinogovana newe 9 inokurudzirwa maresitorendi muguta.
2 Iyo Hummuseria
3 Penthouse 11
4 Taqueria El Chaparrito Meya
6 Lhardy Imba
8 Tavern neMedia
9 Ngirozi Sierra Tavern
Kutsvaga resitorendi kwaunogona kudya zvakanaka uye zvakachipa pakati peMadrid kunogona kuva kwakaoma. Escarpín ndeye Asturian cider imba yehupenyu hwese Uye ndeimwe yenzvimbo idzo kwaunopedzisira nedumbu rako rizere nemutengo unonzwisisika. Iyo iri paCalle Hileras, padyo padyo nePaza Meya. Iyoresitorendi yakavhura madhoo ayo muna 1975 uye yave nzvimbo yemazuva ano uye yakagadziridzwa, ichichengetedza tsika yayo yechinyakare.
Escarpín inopa mhando yakakwana yezuva nezuva menyu, neyekutanga neyechipiri kosi, yema12 euros chete. Uye zvakare, menyu yayo yakasiyanasiyana, iwe unogona kusarudza inonaka yekuravira menyu kana kusarudza yechinyakare dhishi reAsturian. Kana iwe ukaenda, ive shuwa kuyedza yakasarudzika cachopo matatu machizi, akasarudzika epamba, uye bhinzi nemakomba, ayo ari kunyanya akanaka.
Ndinoda hummus. Muchokwadi, ndaigona kuitora zuva rega rega rehupenyu hwangu ndisinganetse. Nekudaro, ini handina kumbofungidzira kuti paigona kuve neresitorendi iyo yaizotarisa yayo yese menyu pane iyi dhishi, kutanga kuMiddle East. La Hummuseria, yakavhurwa muna 2015 nemurume nemukadzi vekuIsrael, inopa chikafu chine hutano chine vegan sarudzo umo hummus ndiyo protagonist. Nekudaro, kana iwe uri unofarira miriwo, zvinonhuwira uye, chokwadika, hummus, haugone kupotsa iyiresitorendi! Icho ratidziro yekuti iwe unogona kudya kunze, kunakirwa zvisingaverengeke zvinwiwa uye chengetedza kudya kwakakodzera.
Nzvimbo yacho zvakare yakanaka kwazvo. Iko kushongedza kwemazuva ano, huni uye musanganiswa wemavara zvinoita La Hummuseria nzvimbo inodziya kwazvo iko iwe fema zvakanaka vibes.
Kana iwe uchipfuura nepakati kana kana, seni, uchida guta, haugone kubva kuMadrid usina kunakidzwa neimwe yeakanakisa maonero eguta. Kune mahotera ayo, padenga repamusoro, ane chinjiri kudya uye kunwa. Kunyangwe idzi nzvimbo dzisingawanzo dzakachipa kwazvo, zvakakodzera kuenda nguva nenguva.
Teresi yeIhotera Iberoestar las letras, Attic 11, ndiye wandinofarira. Nemhepo yehudiki uye isina hanya, Attic 11, ndiyo nzvimbo yakanaka yekuona kuvira kwezuva, ivai nemabiko uye teerera kumimhanzi yakanaka. Musi weMugovera neChishanu manheru vanoronga zvikamu zveDJ, chirongwa chakakura kana iwe uri kutsvaga kunakidzwa kwechinguva mune imwe nzvimbo ine hunyanzvi uye yakasarudzika.
Chimwe chinhu chinonakidza chikafu chayo, zvichibva pakudya kweMediterranean uye zvigadzirwa gourmet dzenyika mavambo. Iyo madhishi akagadzirwa nemubiki Rafael Cordón uye akagadzirirwa mune Gastro Bhawa iri panze, tichiona mutengi.
Taqueria El Chaparrito Meya
Dzimwe nguva isu tinoda kusiyanisa uye kuyedza zvinhu zvitsva, nerombo rakanaka Madrid ndiro rakakodzera guta kuita kudaro. Ye 2020 - 2021 yakatumidzwa zita reIbero -American Capital yeGastronomic Tsika. Saka kana uchida chikafu chechiLatinUsanetseke, haufanire kubata ndege vhiki yega yega kuti unakirwe nayo.
Ini pachangu, ndine shungu nezveMexico gastronomy uye ndakashanyira akasiyana taquerías muMadrid. Pasina kupokana, wandinoda anga ari "El Chaparrito Mayor". Iyo inzvimbo, iri anenge mazana maviri emamita kubva kuPaza Meya uye inodhura zvisingaite. Ivo vanopa tacos pa1 euro, saka unogona kuyedza ingangoita iyo menyu yese.Vanonaka! Ndanga ndiri kuMexico uye ndinogona kupika kuti chikafu chinobva panzvimbo ino chinokufambisa.
Kana iwe uri pakati uye iwe usingade kushandisa yakawandisa mari, chirongwa ichi chinonakidza kwazvo. Nzvimbo yacho yakanaka kwazvoIyo yakashongedzwa nemavara akajeka, murals uye ruzivo rwunozoita kuti iwe ufambe. Vashandi vane hushamwari. Kana uine nguva shoma, ndinokurudzira kuti ugare kubhawa, odha mamwe margaritas uye ma tacos akati wandei, cochinita pibil uye zvekare tacos al pastor.
Kana uchiri kuda famba nepakanaka, Iwe uchada iyo Miyama Castellana. Iyi yekudyira yekuJapan yakavhurwa muMadrid muna2009 uye, kubvira ipapo, yakwanisa kuhwina pamusoro pevanoda chikafu cheJapan.
Imo chaimo muPaseo de la Castellana, iyo nzvimbo, minimalist uye inodziya, yakanaka kunakidzwa nekudya kwenguva refu neshamwari kana mhuri. Mubiki, Junji Odaka, akwanisa kugadzira menyu ne mazhinji echinyakare madhishi eJapan, ichichipa kubata kwazvino uye kunaka kwekunakidzwa.
Iyo yekudyira haina kunyanya kudhura, asi kune yepamusoro mhando chikafu, mitengo yacho haina kukwirisa kana. Pakati pezvakakosha zveiyo menyu ndeiyi: wagyu nyama, iyo sashimi yenzombe, iyo nigiri ye tuna uye, zvechokwadi, iyo Sushi.
Paunosvika mune rimwe guta nyowani, chinonakidza chinhu kuedza zvaro madhishi. Iyo Madrid stew Iyo ndiyo yechinyakare kwazvo pane ese gastronomy yenharaunda, saka, kana usiri wekuMadrid, haufanire kurasikirwa nemukana wekuiyedza.
Kune nzvimbo dzisingaverengeke kwavanoshandira chikafu chakanaka, asi kana iri nguva yako yekutanga… wadii kuzviita munzvimbo ine nhoroondo? Casa Lhardy, mamaira mashoma kubva kuPuerta del Sol, yakavambwa muna 1839. Iresitorendi, inoonekwa seyekutanga muMadrid yese, inochengetedza kushongedzwa kwezana ramakore rechiXNUMX uye zvinotoratidzika kunge zvinotaurwa mumabasa evanyori vechimiro chaBenito Pérez Galdós kana Luis Coloma. Saka kana iwe uchida kusangana neakanyanya echinyakare Madrid, ino nzvimbo ndizvo chaizvo zvauri kutsvaga.
Kana chiri chikafu, iwe uchaona kuti isainzi kuidya. KuCasa Lhardy, vanoishandira muzvikamu zviviri, kutanga muto uyezve zvimwe zvese. Ini ndinoda kuidya yese pamwe chete, ndinofungidzira kuti, kune vazhinji vemunharaunda, ichi chichava chiitiko chinoshamisa. Asi, chero chii chaunodya, chikafu chinonaka uye chinonzwa kunakirwa munguva yechando.
Kana tikaramba tichitaura nezvechikafu chakajairika, hatigone kukanganwa sangweji yecalamari. Zvinogona kutaridzika kunge mubatanidzwa "wekunze" kune isu vedu vasiri vanobva kuguta uye, nekudaro, kune vanhu vasingatsunge kuzviedza, asi ndinokuvimbisai kuti kufira icho. Kune akati wandei nzvimbo dzakapoterera Plaza Meya Ivo vanoishandira uye, kunyangwe vachiwanzo rongedzwa nevanhu nekuti inzvimbo inoshanya kwazvo, zvakakodzera kumirira nekudya sangweji yako iwe uchishanyira guta
Bhawa reLa Campana nderimwe remhando yepamusoro muMadrid uye vanotengesa Calamari sandwiches kwema3 euros chete. Basa racho rinokurumidza uye doro rinotonhora chaizvo Ndezvipi zvimwe zvaungade !?
Pane here chimwe chinhu chinodanana kupfuura chemanheru akanaka chakabatanidzwa newaini? Taberna y Media ndiyo yekudyira yakanaka kushamisa mumwe wako, kana ndiani mumwe waunofarira, nechikafu chakanakisa munzvimbo yepedyo uye yakakosha. Chii chimwe, zvakanaka pedyo neRetiro Park, imwe yenzvimbo dzechiratidzo zvikuru muMadrid. Kufamba nepapu yakasvibira iropafadzo.Hapana zano riri nani rekudzikisa chikafu!
Iyo yekudyira ine nyaya yakanakisa kuseri kwayo, chirongwa che baba nemwanakomana, José Luís naSergio Martínez, avo vakabatanidza mazano avo kuti vagadzire nzvimbo yakatsaurirwa tapas uye echinyakare migove.
Mubhawa rayo uye muimba yekudyira, ivo vanopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvechinyakare madhishi nemabatiro ehaute cuisine. Iyo yakashongedzwa dama nemiriwo uye cocoa, imba saladhi uye tripe zvine inoshamisa inonaka. Kana iwe wakaita seni, uyo anogara achisiya nzvimbo diki yedhizeti, haugone kuramba kuodha yakasviba anise toast nevanilla ice cream.
Ngirozi Sierra Tavern
Vermouth inzvimbo muMadrid, kana iwe uchida kunzwa kunge chizvarwa chaicho cheMadrid, haugone kupotsa nguva yekupa mukana. Kuwana yakanaka vermouth muMadrid zviri nyore, kune masayiti anotopa mhando dzakasiyana. Semuenzaniso, La Hora del Vermut, mune San Miguel Musika, ine huwandu hwese makumi masere emhando dzenyika mavambo. Iyo tembere yakatsaurirwa kune ichi chinwiwa, ine zvakare yakanaka kwazvo tapas uye pickles menyu.
Nekudaro, ini ndiri wewakawanda wemuno anoburitsa tsika uye, kunwa vermouth, hapana chinhu chiri nani kupfuura tarenda yakanaka ine mapuranga ari kuona. La Taberna de Ángel Sierra inogona nzvimbo yakatendeka yandati ndambosangana nayo muguta. Inowanikwa muChueca, inomira kunze kwekushongedza kwayo. Mabhodhoro akaunganidzwa pamadziro, huni dzakasviba, siringi izere nemifananidzo uye pendi, zviyeuchidzo zvakagadzirwa uye mataira eCartuja de Sevilla inoita iyo nzvimbo yakasarudzika iyo inofanirwa kushanyirwa.
Madrid inonakidza kwazvo uye ndine chokwadi kuti iwe uchadanana nayo. Ndinovimba kuti iyi rondedzero ye9 inokurudzirwa maresitorendi muguta ichakubatsira iwe kunakidzwa nekugwinya kwayo, asi kana iwe uchida kuwana zvakanyanyisa kubva pakushanya kwako kuguta guru, unogona kukurudzirwa nerunyorwa urwu rwe 10 zvakanakisa zvinhu zvekuita muMadrid.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Madrid » Kudya kupi kuMadrid? 9 inokurudzirwa maresitorendi muguta
Great post. Kuti ndizvifungisise parwendo rwangu rwunotevera kuMadrid
Pindura kuna Nyasha
Zvokuita muDominican Republic